Kwayedza Pilot, isingazivikanwe asi inobatsira Mozilla Firefox chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Kunyange hazvo Mozilla Firefox OS yanga iri njodzi kuMozilla Foundation, mamwe mapurojekiti ari kubudirira uye ave kuita mukurumbira, zvichiita kuti webhusaiti yeFirefox iwedzere kushandiswa pakati pevashandisi veGnu / Linux chete asiwo macOS.kana Windows 10. Makore mashoma apfuura, Mozilla yakatanga chirongwa cheTest Pilot, chirongwa chinobatana neMozilla Firefox kuti chigadzire zvirinani maficha uye ekuwedzera ma-browser eMozilla. Imwe nguva gare gare, Test Pilot ine nhamba yakakura yevashandisi uye mashandisiro ayo ari kuve anozivikanwa, ndosaka tichinyatsokuudza chii chinonzi Test Pilot uye kuti tingaiisa sei muwebhu browser yedu, zvisinei nekuparadzirwa kweGnu / Linux kwatinako kana nehurongwa hwekushandisa hwatinoshandisa.
1 Chii chinonzi Test Pilot
2 Maitiro ekuisa Test Pilot pane yedu Gnu / linux
3 Maedzo Ekuedza Pilot anoshanda sei muFirefox
4 Ndezvipi zvishandiso zvatingawana zvinowirirana neTest Pilot
5 Inokurudzirwa kushandisa Test Pilot
Chii chinonzi Test Pilot
Kwayedza Pilot iko kunyorera kana software inoiswa muMozilla Firefox uye ine chinangwa chiri gadzira nzvimbo yekuyedza yesoftware kana mawedzero ayo ari kuda kuburitswa mubrowser yeMozilla kana izvo zvinoedza. Iyi software inogona kuve yemuno Mozilla Firefox chimiro kana yekuwedzera, zvese zvinoenderana nechikwata chiri seri kwekuvandudza. Chero zvazvingaitika, ndatenda Kwayedza Pilot ichave yakagadzikana uye yakanyanya kuyedzwa software iyo yatinogona kushandisa zvakasununguka mune isiri kure kure ramangwana kubva kune yedu yewebhu browser.
Tinogona kutaura kuti Test Pilot inzvimbo yekuyedza iyo ichaunganidza ruzivo kubva kune software yatakaisa. Ndosaka Test Pilot isiri yekuwedzera kune vese vashandisi asi kune avo vari vashandisi vehunyanzvi, vanogadzira uyezve, avo vasina hanya nekugovana dhata neMozilla uye vanoda kubatana neMozilla Community Iko kukosha kweTest Pilot kuyedza software kana maficha ari pasi pekuvandudza uye tumira ruzivo rwaunotora kune anovandudza kana timu yekusimudzira kana kungo sarudza kana basa racho rakakosha kana kuti kwete. Iyi data inogadziriswa neMozilla kuitira kuti isazivikanwe kuchikwata chekuvandudza. asi pane maitiro akadaro saka tinofanirwa kuziva kuti ruzivo rwunozogovanwa uye kuti runogona kubiwa.
Ichi chiratidzo chemazuva ano chinonakidza nekuti chichavandudza kuvandudzwa kwemabasa matsva nemapulagini asi zvinosuwisa kuti ichiri muChirungu, saka iyo Puerto Rico Nharaunda isu tinofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kana kungokudziridza muChirungu kuti tikwanise kushandisa iyi software mukuvandudza kweduIzvi hazvidiwe pachikamu chekuyedza, ndiko kuti, kune vashandisi vanoedza software sezvo isu tichigona kuve newebhusaiti muSpanish uye nekuisa Test Pilot pasina dambudziko.
Maitiro ekuisa Test Pilot pane yedu Gnu / linux
Kuiswa kweTest Pilot muMozilla Firefox yedu kuri nyore kwazvo. Kubva payakatangwa kusvika zvino, Test Pilot yakachinja zvakanyanya kubva pakuva webhu saiti yekuwedzera. Asi pane zvinhu zvatisingakwanise kuita tisipo izvozvi uye iri nhoroondo yeFirefox. Saka, kuve neiyi plugin tinofanirwa kuve neakaundi account yeFirefox uye tishandise muwebhusaiti yedu. Kana tangoita izvi. Tinoenda kukune iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo Bvunzo Pilot chirongwa kwatichawana iyo Test Pilot inokwenenzvera, pamwe nezvirongwa zvakasiyana zvekuyedza uye mabasa atinogona kushandisa muTest Pilot. Mune ino kesi isu tinodzika pasi kuisa Test Pilot chete.
Pamusoro pewebhu browser meseji ichaonekwa ichitibvunza kana tichida kuwedzera iyi plugin. Dzvanya OK uye tichava neTest Pilot basa rakaiswa. Muchikamu chekumusoro kuruboshwe, padhuze nebhatani rezvaunofarira tichawana icon iri muchimiro chechipenga. Nekudzvanya pairi tichawana akasiyana zvishongedzo atinogona kushandisa kuyedza uye kuyedza.
Maedzo Ekuedza Pilot anoshanda sei muFirefox
Kwayedza Pilot ibhenji rekuyedza asi tekinoroji iri mudziyo kana bhokisi rejecha iro rinoita iro rakawedzerwa basa kana rinowirirana pane chairo gadziriso. Nayo pachayo haina kutaurira chero chinhu kana kuwedzera mabasa matsva kuwebhusaiti yedu asi kana chiri icho chinodiwa chigadziko chekuisa ma plugins nemabasa ari kugadzirwa.
Nekudaro, kuti tione uye kuyedza Kuchengetedza Kuchengetedzwa, chiwedzero chakakurumbira, isu tinofanirwa kutanga tave neTest Pilot uyezve wobva wawedzera iyo Yekudzivirira Yekudzivirira inowedzera Nekudaro, pane yepamutemo Test Pilot webhusaiti, chinhu chekutanga chavanopa kuisa iyo yekuwedzera-pamwe pamwe neTest Pilot. Kana yangoiswa, iyo webhurawuza inotumira iwo ruzivo nezve mashandiro kune timu yekusimudzira. Zvese zvisingazivikanwe asi ruzivo rwedu.
Ndezvipi zvishandiso zvatingawana zvinowirirana neTest Pilot
Izvo zvinodiwa kune vanogadzira kuti vave chikamu cheTest Pilot chikuva yakawanda. Ndokunge, isu hatigone kugadzira plugin ine mitsara mitatu yekodhi uye kuiisa kune iyo Test Pilot chikuva. Panofanirwa kuve nekukura kwakakura kumashure kuti upinde muTest Pilot uye mushure mekuyedza kwakati uye budiriro inotsigirwa muTest Pilot. Izvi zvinoreva kuti isu tine mashoma asi anonakidza plugins. Iyo inonyanya kuzivikanwa yeiyi inonzi Kuchengetedza Kuchengetedza, yekuwedzera-yakatarisana yekuwedzera-iyo yakauya pachena sekungobuditswa kwaFacebook nyaya yakavanzika.
Ruvara nderimwe remapulagi anozivikanwa, rakanakira vagadziri uye vanogadzira theme. Midziyo iplagi yakanangana nekugadzira ma profiles sekushandiswa nemamwe mabhurawuza ewebhu, senge Chrome. tuma, Faira rekugovana faira reMozilla iripowo muTest Pilot, mune iyi kesi semubatsiri wekugovana nekutumira mafaera, anonakidza anokwenenzvera ayo anozove mashandiro eMozilla Firefox.
MaNotes uye Side View maviri matsva ekuwedzera-akagadzirirwa kugadzirwa uye izvo zvinotibvumidza isu kubata akawanda akati wandei panguva imwe chete kana kutora zvinyorwa sezvatiri kuongorora. Zvinhu zviviri zvinonakidza zviri kukonzeresa nekuda kwekushanda kwavo kwakanaka uye kugadzirwa.
Aya ndiwo mamwe e lIwo mawedzero-atinogona kuwana pane yepamutemo Test Pilot webhusaiti asi haisi runyorwa rwakavharwa uye haruna kupera, irondedzero ichawedzera zvishoma nezvishoma uye inowanikwa kune wese munhu, zvese zvekare uye zvitsva zvishongedzo.
Inokurudzirwa kushandisa Test Pilot
Pamwe iwo mamirioni emadhora mubvunzo. Ini pachangu, ndinofunga kuti kana tiine yekugadzira komputa, kambani yekomputa kana chimwe chinhu chakafanana, iko kushandisa kweTest Pilot hakubatsiri nekuti panogona kunge paine kukanganisa kana dambudziko rinoguma nebasa rakakosha ratiri kuita. Asi Kana iri komputa yedu pachedu yatinoshandisa kufamba uye voila, Test Pilot inonakidza kwazvo uye inzira huru yekutora chikamu munharaunda Yemahara Software.. Izvo zvinogona zvakare kuita kwedu kwega kufamba pachena kuvandudza kuvonga kune zvinowedzera-senge seSide View kana manotsi. Ehezve, isu tinofanirwa kuziva nguva dzese kuti ruzivo rwedu runogovaniswa uye kunyangwe chikamu charo chichava cheveruzhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Kwayedza Pilot, isingazivikanwe asi inobatsira Mozilla Firefox chishandiso